Shir-guddoonada KMG ee Baarlamaanada Labada Aqal oo lagu dhawaaqay – STAR FM SOMALIA
Waxaa goor dhow lagu dhawaaqay labada nin ee ugu da’da weyn Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose, kuwaasoo noqonaya Shir-guddoonka labada Aqal.
Labada Xildhibaan ayaa si wada jir ah u shir-guddoomin doona labada Aqal ee Baarlamaanka, kuwaasoo soo magacaabi doona Guddiga doorashada.
Waxaa labada xildhibaan ee ugu da’da weyn wehlin doona labada xildhibaan ee ugu da’da yar labada Aqal oo lagu kala magacaabo Ikraan iyo Fartuun.
Si kastaba ha ahaatee Shir-guddoonak cusub ee Labada aqal ayaa howsha la wareegi doona, inta laga soo dooranayo Guddoonka cusub ee labada Aqal.
Qaar Kamid ah Musharaxiinta Madaxweynaha oo baaq deg deg u diray Golaha Ammaanka ee QM